PressReader - Kwayedza: 2018-11-02 - Musakare mari zvakadaro
Musakare mari zvakadaro
Kwayedza - 2018-11-02 - Maonero Edu -
SVONDO rapera Hurumende yakavandud­za mutemo unotendera makambani nevamwewo vanhu vane mari yekunze kuti vakwanise kutenga zvinhu zvinoshand­iswa neveruzhin­ji mazuva ose kunze kw enyika. Mute mo we Statutory Instrument( SI )122 of2017wak av andudzwaz vi chit ever a kukwira kwakanyany­a kwemitengo yezv in humuzvitor­o.
Izvi zvichaona vemakamban­i nevanhu vakazvimir­ira vachikwani­sa ku ten gazvinhuz vinos an gan is ira ma fut ae ku bi kisa,s hug a,fu raw a,m ajar i ni, mupunga nezvimwe kubva kunze kwenyika.
Z vi mwezvinok wan isak utengwakun­ze kw enyi kan dez vi not i sim en de, marata ekuturikis­a dzimba nemabhara.
Veruzhinji va kat a mb iranep aka siy ana dan ho ra kat or wan eH ur um en de ir ia po vamw eva rik ur it sig ira va chitiz vic ha it a ku tizvinhuzv­angez vic his hai kw amuz vi tor oz vi wanik we.
Asi kune vamwe vemaindasi­tiri vane pfungwa dzekuti danho iri rinogona kudzosera budiriro yavo shure sezvo pazvinhu zvavanogad­zira van eng ev ave ku kwikwi dz ana pam it eng onezv in ob va kunze kw enyika. Semaonero edu, kukwikwidz­ana kwemitengo yezvinhu kwakatonak­a chose nekuti kunoita kuti mitengo isanyanye kukwira sezviri kuitika mazuva ano. Kana pakave nekukwikwi­dzana kwemitengo vatengi vanokwanis­a kusarudza kwavanoda kutenga.
Kukwira kuri kuita mitengo yezvinhu kwaomesera veruzhinji sezvo vasisakwan­ise kutenga zvinhu zvavanosha­ndisa mazuva ose seshuga ne ma fut ae ku bis a.Vezvitorov ari kun go kw i dz a mi ten go yezvinhuzu va nezuva zvekuti munhu unopedzira wazvishair­wa shumo yazvo.
Z vi mwezvezv in huiz vi haz vic hat ow a ni kw amuzvitoro­a sip am usika wemukoto zviripo nemitengo yakakwira zvikuru.
Semuenzani­so, mutengo wemarita maviri emafuta ekubikisa wava pakati pe$4 kusvika $18 kunzvimbo dzakasiyan­a.
Izvi zvinotarid­za pachena kuti pane vamwe vanhu vave kukara mari zvak ad ari kid zane ku tim ut eng owe chinhuc him we che te haun ga si ya ne zvakadaro. Tinorumbid­zwa zvakare danho rakatorwa neHurumend­e re ku mb om is a ku kw ira kw emu ten go we chingwakub va pa $1.10 ku end a pa $2.20. Iz viz vi not ever akuz iv iswa kw a kan gek wait wa ne vemak am ban i anobika chingwa kuti anoda kukwidza mutengo wechingwa achipa chikonzero chekuti mutengo wegorosi nezvimwe zvavanosha­ndisa pakubika chingwa zvakwirawo.
Chingwa chakakosha zvikuru kumhuri dzakawanda munyika muno nekuti ndicho chinowanzo­dyiwa munguva dzemangwan­ani.
Mat an ho ari ku tor w an eHu rumen de a ya a not arid zakut ii nez vi dozv evan humunyika.K ana mi ten go yezv in hui kara mb ai chi kw ira as iv ash an di va sing a we dz er we mariya van oh ora pa ku shanda kw a va no it a,z vin or eva kuti vanopedzis­ira votadza kutenga zvinhu izvi.
Nekudaro Hurumende inofanira kurumbidzw­a zvikuru nematanho aka siy ana airikut ora mu kug ad z iris amata mbudzikoa rik us ang ana neveruzh in jimunyika.
Veruzhinji pamwe nevezvitor­o vanofanira­wo kusiyana nenyaya dz ehuwori ne ku tin dizv oz vi mwezviri ku it a ku tim it en go yezv in huik wire zvisina tsarukano.
Kune vamwe vane katsika kekungohod­ha zvinhu uyewo nevamwe vezvitoro vanonzi vari kuendesa zvinhu pamusika wemukoto.
Imi vezvitoro musakare mari zvakadaro!